Puntland “Wax casuumaad ah kama helin ka qeyb galka shirka ka dhacaya London” – SBC
Puntland “Wax casuumaad ah kama helin ka qeyb galka shirka ka dhacaya London”
War Saxaafadeed ka soo baxay Dowlada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Dowlada Puntland aanay ka qeyb galeynin shirka Dhinacyada Soomaalida ugaga furmaya Magaalada London Cariga Dalkaasi ingiriiska Maalinta Talaadada ah ee Soo socota.
Nuqul ka mid ah oo la soo gaarsiiyay SBC Islamarkaana ku qornaa afka Ingriisiga ayaa lagu sheegay in dowlada Puntland aanay ka helin Wax casuumaad ah shirka ka dhacaya London sidaasi awgeedna aanay ka qeyb gali doonin.
Waxay Puntland sheegaty in ay taageersantahay Dowlada dhexe ee Soomaaliya ayna ka shaqeyneyso heshiiskii dhexmaray iyada iyo Maamulka dhexe una taagan tahay midnimada iyo wada shaqeynta
Kulan ku dhexmaray gudaha Magaalada Garoowe maxda Sar sare ee Puntland iyo Xukuumada Federaalka ah oo arintan la isula soo qaaday ayaan wax is afgarad buuxa laga gaarin maalmo ka hor.
Maalin nimadii shalay hadal uu ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya Hortooda ayaa waxa uu ku sheegay in Shirka London ay ka qeyb galayaan Maamul goboleedyada dalka ka jira ayna qaban qaabadiisa wada leeyihiin isaga iyo Raiisul wasaaraha Dalkaasi Ingiriiska .
Ku dhawaaqista ka qeyb galid la’aanta shirkan ee ay ku dhawaaqday Puntland waxa ay ku soo aadeysaa xili maamulka la baxay Soomaaliland ay dhankooda masuuliyiintiisa qalabka warbaahinta ka sheegeen in aany diyaar u aheyn ka qeibgalka shirka ka dhici doona London.